प्रचण्ड र माधव नेपाललाई सुझाव पत्र ! « Pariwartan Khabar
21 August, 2019 4:56 pm
०४ भदौ २०७६, काठमाडौं
राजसंस्था सहितको प्रजातान्त्रिक सरकार, दल विनाको राजाको निरंकुश सरकार र गणतान्त्रिक नेपालको संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको काम कारवाही भोग्ने र अनुभव गर्ने एउटा आम नेपाली म पनि हुँ । त्यतिमात्र होईन, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले कू गरेको भोलिपल्ट बागबजारमा निकालिएको राँके जुलुसमा सहभागी थोरै सहभागी मध्ये म पनि एक हुँ ।
नेपालकै ईतिहासमा राजा विरुद्धको सांकेतिक जनमत संग्रह गराउने पहिलो अभियन्ता मध्येको एक जना अगुवा म पनि हुँ । राजाले कू गरेदेखि गणतान्त्रिक संविधान घोषणा हुँदा सम्म निरन्तर हिड्ने लाखौं जनता मध्ये म पनि एक हुँ ।
त्यसैले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक परिपाटीमा भोट मात्र हाल्न पाएपनि यो व्यवस्थाको विकल्प छैन । यसै व्यवस्था मार्फत ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ बनाउन सकिन्छ भन्ने लाखौं मध्येको एउटा शुभेच्छुक म पनि हुँ ।
आदरणीय माधव नेपाल,
तपाई १५ वर्ष तत्कालीन नेकपा एमालेको शक्तिशाली प्रमुख बन्नुभयो । त्यो बेला तपाईले पार्टी हित र संगठन निर्माणमा सकेको योगदान पुर्याउनु भयो । निर्वाचनमा आफू र आफूले नेतृत्व गरेको पार्टीले टिठ लाग्दो पराजय व्यहोरेपछि आफ्नै ब्रम्हले विचारेर राजिनामा दिनु भएको होईन र ? पार्टी जब रक्षात्मक हुन्छ, नैतिकताको नाममा राजिनामा दिने र पार्टी शक्तिशाली हुँदा नेतृत्वको गर्ने सबै कसर तपाईले पनि कहाँ बाँकी राख्नु भो र ?
पार्टी पद्धतिसंगत ढंगले चल्नुपर्छ । नीति नियम र अनुशासन सबैमा लागु हुनुपर्छ । अनि पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद र लेनिनवाद भनेपछि पार्टी लेलिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तमा चल्ने नै भयो । जनवादी केन्द्रीयताको व्याख्या पनि हिजो पार्टीको नेतृत्वमा हुँदा तपाईले पनि त्यहि गर्नुभयो । अनि पार्टीको नीति अनुसार हो भन्दै आफ्ना निर्णयको बचावट गर्नुभो । आज अरुले त्यहि गरे । अनि किन यस्तो असन्तोष ?
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सचिवालय वरियतामा झलनाथ खनाल भन्दा माथी राख्दा र पार्टी एकताको काम ठप्प हुदा चाहिँ आफ्नो लिखित धारणा लेख्नु नपर्ने अनि आफ्नो वरियता घटेको २४ घण्टा पनि बित्न नभ्याउँदै सबै कुरा लेखेरै राख्नुपर्ने ? यो दुई अवस्थाको बारेमा आम नागरिक वा कार्यकर्ताले के फरक पाउलान र ? पार्टीमा रेकर्ड होस् भन्ने उद्देश्यले लिखित नोट अफ डिसेन्ट राख्नु नै थियो भने आफ्नै पुरानो अडान अनुसार सचिवालयमा अष्ट लक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञावली र भिम रावल थप्ने कुरा छुटाउनुको असर बारे ध्यान पुर्याउनु पर्ने थिएन र ?
आदरणीय पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
तपाई ३५ वर्षदेखि पार्टी प्रमुखको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । पार्टीलाई सशस्त्र क्रान्ती देखि सफलताको शिखर र क्षयीकरणको अवस्थासम्मको अनुभव तपाई आफैँसँग छ । जनयुद्धको समयमा पार्टी र आन्दोलनलाई धोका दिएको भन्दै आफ्नै सहकर्मीलाई चरम यातना दिएको समेत सुनियो । अहिले त तपाईं प्रजातान्त्रिक आचरण बोकेको कम्युनिस्ट पार्टीमा रुपान्तरित भै सक्नुभो ! तपाईलाई जनयुद्धमा साथ दिने कार्यकर्ता र जनताले के पाए ? त्यो विषय जनयुद्धमा सहभागी हुनेहरुले नै मूल्यांकन गर्लान तर व्यक्तिगत रुपमा तपाईले पार्टी नेतृत्व र मुलुकको प्रधानमन्त्रीको अनुभव समेत सम्हाल्ने अवसर पाउनुभयो ।
समग्रमा भन्दा ३५ वर्षे कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरेपछि तपाई र तपाईको परिवारका सदस्यले जति लाभ पाए, सायदै त्यो अवसर सहकर्मी र पार्टी कार्यकर्ताले पाए ।
नेकपाले पाएको अहिलेको जनमत न तपाईको व्यक्तिगत छवीको परिणाम हो न तपाईले नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादीको नै ! त्यसैले अहिले सरकारको नेतृत्व दावी गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई चुनौती दिनु नै हो । अपमान गर्नु हो, जुन तपाईले स्वीकार गरिसक्नु भएको छ ।
शक्ति केन्द्रमा कोहि व्यक्ति हुँदा र नहुँदा आम जनताले पाउने सुविधामा केहि अन्तर भएन । देखिएन । खास अन्तर केहि सय आफ्ना नजिकका सहयोगी र आफन्तले पाउने रहेछन् । त्यसैले पार्टीको जिम्मेवार नेताको हैसियतले व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर केहि आफन्तलाई शक्तिमा ल्याउन स्थिरता तर्फ अगाडि बढेको मुलुकलाई किन अस्थिरता तर्फ उन्मुख गराउने योजनामा हुनुहुन्छ ? फेरिपनि मुलुक अस्थिरता तर्फ जानु भनेको कम्युनिस्ट शासनको अन्त्य र मुलुकको अधोगति शिवाय केहिपनि होइन ।
समग्र कर्मचारीतन्त्र सरकारलाई सफल बनाउन लागेकै देखिएन । अनेकौं सम्झौता र करानामा गराएर प्रधानमन्त्रीले कामलाई परिणाममुखी बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ । त्यस्तो जटिल अवस्थामा प्रधानमन्त्री देश बाहिर हिड्यो कि अब सरकार फेरिन्छ भन्दै आफैँ हल्ला गर्नुहुन्छ । तपाईको सम्झौता २ वर्षे होस् वा ५ वर्षे जनताले विकास चाहेका छन्, अमुक प्रधानमन्त्री र मन्त्री होईन् ।
तपाईहरु दुबैजना मुलुकको प्रधानमन्त्री भई सक्नुभो । आफ्नो कार्यकालमा सकेको राम्रो गर्नुभो । तपाईहरु देश र जनताको राजनेता नै हो । तर अहिले नेकपाले ल्याएको मत स्थीर सरकारको लागि हो । लाखौं जनताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ५ वर्ष सत्ता संचालनको लागि दिएको म्यान्डेट हो त्यो जनमत !
आम जनताले बुझेका छन् कि वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई ढाल्न सहज नभएर पहिले पार्टी कब्जा गर्ने अनि सरकार भन्ने ध्यानमा तपाईहरु लाग्नु भएको छ । तपाईहरु ३ दशक लामो समयदेखि पार्टीको उच्च नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । १ वर्ष भित्र गर्ने भनिएको पार्टी महाधिवेशनसम्म समेत कुर्ने धर्यता छैन भने तपाईहरुलाई हेरेर सहयोग गर्ने भावी नेतृत्वले तपाईहरुबाट के सिक्ने ? त्यसैले पार्टी नेतृत्वको विषय महाधिवेशनले टुङ्गोमा पुग्ने गरी संगठन निर्माण र तीनै तहका निर्वाचित सरकारलाई सफल बनाउनतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्दा पार्टी, सरकार र सहकर्मी सबैको भलो हुन्छ ।
तपाईंहरु अनुभवले परिपक्क नेता हुनुहुन्छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीको हिसाबले अति विशिष्ट सुविधा र सुरक्षा लिनु भएकै छ । नपुगे अझै थप्नुस र प्रधानमन्त्री सरह नै लिनुस । तपाईहरु ३ जना नै मिलेर देश निर्माणको महाअभियानमा चल्नुपर्छ । तर लामो समयदेखि अस्थिर राजनीतिबाट छुट्कारा पाएको मेरो देश र बामे सर्न लागेको नेपालको विकास प्रक्रियालाई समाप्त पार्ने तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रीत नगर्नुहोस् । यसैमा हामी सबै नेपालीको कल्याण हुनेछ । नेकपाको कल्याण हुनेछ । जय नेपाल ।